भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै महानगर
17th November 2019, Sunday
काठमाडौं । ३० असार २०७६ मा काठमाडौं महानगरपालिका, सामाजिक विकास विभागका नायव सुब्बा (पाँचौं तह) का कृष्णप्रसाद सोती कार्यालय परिसर परिसर बबरमहलबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको फन्दामा परे । १ लाख ७ हजार रुपैयाँ घुस रकमसहित पक्राउ परेका परेका उनी कांग्रेसनिकट महानगर कर्मचारी एकाइ अध्यक्षसमेत हुन् ।
अख्तियारको टोलीले घुससहित नियन्त्रणमा लिएपछि सोती टोलीसँग जंगिए । उनले भने, ‘लेखा अधिकृतहरूलाई चाहिँ के हुन्छ ? हाकिमहरूलाई चै के हुन्छ ?’ लेखा अधिकृत र हाकिमहरूको आदेशअनुसार आफूले काम गरेको उनको दाबी थियो । उनले जंगिँदै भनेको लेखा अधिकृत हुन्, श्याम न्यौपाने । स्रोतका अनुसार १ लाख ७ हजार घुसका हकदार उनी पनि थिए । न्यौपानेले भुक्तानीबापतको चेक घुस पाएपछि मात्रै काट्ने गरेको भन्दै सोतीले न्यौपानेलाई समेत अख्तियारमा पोलेका छन् ।
स्रोतका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका हरेकजसो कामहरूमा कर्मचारीहरूले ‘हलो अड्काएर’ राख्ने गरेका छन् । सरकारले विभिन्न संघ, संस्था र प्रतिष्ठानहरूलाई दिने अनुदान रकम पनि महानगरमार्फत नै भुक्तानी हुने गरेको छ । हरेकजसो कार्यक्रम र काममा कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम कर्मचारीहरूले माग्ने गरेका छन् । ५ प्रतिशत रकमको ग्यारेन्टी नभएसम्म काम नै नहुने सेवाग्राहीहरूको भनाइ छ । एक सेवाग्राहीले भने, ‘अन्तिममा लेखा अधिकृतले यसको कुरो मिलाउनुभयो त ? भनेर सोध्छन् । हजुर मिलाएँ भनेपछि मात्रै चेक काट्छन् । त्यो कुरा भनेको चाहिँ घुस रहेछ ।’
शिक्षानीति अपुरै, विदेशतिर हान्निए मन्त्री
अपांग कोषमा मच्चियो भाँडभैलो
फेरि बिचौलियालाई पोस्ने काम
वामदेवलाई आफ्नैबाट त्रास
कमिसनकै लागि अनावश्यक गाडि खरिद
‘साइड इफेक्ट’ अध्ययनपछि प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किने
सम्पर्कमै आएनन् मेलम्चीका ठेकेदार
मन्त्रीको अनिच्छाले परिषद् शून्य
सुरु नहुँदै ओसाका उडान जोखिममा
ShareTweet काठमाडौं । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि- ...
ShareTweet काठमाडौं । राष्ट्रिय अपांग कोषका सभापति र सचिवबीचको लफडा- ...
अलपत्रै छाडियो कम्प्युटर ल्याब
ShareTweet काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अत्याधुनिक कम्प्युटर ल्याब राख्न देशभरिका करिब एक हजार विद्यालयसँग सम्झौता गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि अझै काम- ...
कति दुख्छ कालापानी ?
ShareTweet यतिबेला राष्ट्रवादी स्वरलहरी गुन्जिइरहेका छन्, सर्वत्र । युवापंक्ति सडकमा ओर्लिएका छन् । आवाज घन्काइरहेका छन्– ‘लिपुलेक हाम्रो हो ।’ नेपालको भूभाग एकपक्षीय- ...
आफ्नै ठगी बुद्धिले रूपज्योति फन्दामा
ShareTweet काठमाडौं । अर्बौंको कारोबार भएका चर्चित व्यापारी रूपज्योति करोड चानचुनको ठगीमा परेका छन् । जग्गा बेच्न भन्दै विज्ञेन्द्र मल्लसँग एक करोड २६ लाख बैना लिएर- ...
बालुवा ठगलाई उम्काउने खेल
ShareTweet काठमाडौं । प्रहरीले गुन्डानाइके सुकबहादुर लामा अर्थात्- ...
उपनिर्वाचनको सरगर्मी सुरु
ShareTweet काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले मंसिर १४ मा- ...